U-ANNE ENEXESHA LE-E LE-4 YONKE INTO EKUFUNEKA UYAZI MALUNGA NOMDLALO OZAYO, ITRAILER, KUNYE NOHLAZIYO LWAMVA NJE OMELE UYAZI - IINKQUBO ZETV
U-Anne kunye no-E luchungechunge lomdlalo weqonga waseKhanada oza kwiminyaka yobudala. UMoira Walley-Beckett wenza uthotho kwaye wabhala i
U-Anne Kunye no-E luthotho lweedrama zaseCanada ezizayo. UMoira Walley-Beckett wenza uthotho kwaye wabhala i-screenplay kolu ngcelele.
Icebo lika-Anne kunye no-E
Olu luhlu lulandela u-Anne, inkedama ekwishumi elivisayo oye wanyamezelwa ngumntwana ophethwe gadalala. Uzibonakalisa ukuba unomoya oyingqayizivele kunye nokucinga. Usebenzisa ubukrelekrele bakhe ukunceda wonke umntu kunye nokuguqula ubomi babo.
Ngelishwa kubo bonke abalandeli bakolu ngcelele, I-Netflix irhoxisiwe u-Anne ene-E Kungekudala emva kokukhutshwa kwexesha lesithathu ngo-Novemba ngo-2019. Abalandeli basungule iphulo ku-Twitter becela iNetflix ukuba ihlaziye uthotho. I-hashtag #renewannewithane isungulwe kwaye ineziphumo ezingaphezulu kwesigidi. Umlingisi waseCanada kunye nenkanyezi ye-Deadpool, uRyan Reynolds naye wajoyina iphulo lokusindisa umboniso. Ngaphandle kwenkxaso eyomeleleyo evela kubalandeli, ngelishwa, khange kubekho phuhliso luvela kwiNetflix okanye iCBC kwaye akukho sibhengezo.
Phambi kokuba kukhululwe ixesha lesithathu, i-CBC ibonakalisile ukuba iNetflix ivumile ukuba ixesha lesithathu lelokugqibela. Umongameli we-CBC ukwathe akusayi kuphinda kubandakanyeke nakweyiphi na imveliso eyimbumba kunye neNetflix.
Isizathu esinikiweyo sokurhoxiswa komboniso yayikukunqongophala kokukhula kwabaphulaphuli, ngakumbi kwiminyaka yobudala engama-25 ukuya kuma-54.
Ngaphandle kweNetflix kunye neCBC besithi umboniso awufumani ngokwaneleyo ababukeli, ukuphela kobambiswano lwabo kunokuba lelinye ixesha lokurhoxiswa komboniso.
Bonisa umdali uWalley-Beckett ekwabelwana ngaye kwimithombo yeendaba zentlalo ukuba wayekisiwe kwaye edanile ngenxa yokurhoxiswa komboniso. Uye waveza nokuba uzamile ukufumana iqonga elitsha lokusasaza kodwa akaphumelela ekwenzeni njalo. Uye watyhila ukuba angathanda ukubhala ifilimu yamanqam efayilini eya kuba sisiphelo esifanelekileyo kuthotho, kodwa akakwazanga ukuyenza loo nto.
Omnye umbonisi womboniso, uMiranda de Pencier wabelana ukuba kwakungekho ndlela yokuvuselela umboniso.
Ngaba liza kubakho ixesha lesine?
Ngaphandle kwayo yonke imizamo yabalandeli kunye namaphulo kwimidiya yoluntu, U-Anne Kunye no-E akazukufumana ixesha lesine . Abenzi kunye nabalingisi bamalungu alo mboniso nabo bebethethile kwaye baqhubeka.
Incwadi kaLucy Maud Montgomery yalandela u-Anne Shirley ebudaleni bakhe. Kukho izinto ezininzi ezivela kwiincwadi eziza kuphonononga kwaye zilungelelanise. Ngelishwa, ngekhe ukwazi ukubukela kwiscreen.
Iphulo kumajelo asekuhlaleni, nangona kunjalo, lihlala lomelele, kwaye abalandeli baya kuhlala bekhankasela de umboniso uvuselelwe.
Okwangoku nali elinye ixesha ledrama elibonisa ukuba unokujonga-
Lo mdlalo weNetflix ubalisa ngobomi bukaKumkanikazi uElizabeth II ukusukela kwiminyaka yoo-1940 ukuya kumaxesha anamhlanje. Lo mboniso lukhetho lwabagxeki kwaye uphumelele amawonga amaninzi.
URoss Poldark ubuya emfazweni kwaye ufumene utata wakhe eswelekile, kwaye isithandwa sakhe sitshate nenye indoda. Uye azame kancinci ukwakha ubomi bakhe.
Umlimi nje uphakama ukuba abe ligorha elingenaloyiko kunye nomphathi weViking Tribes.
Le miboniso ngokuqinisekileyo iya kukugcina uxakekile, kwaye uyakonwabela ukubabukela. Ukubukela Ukonwaba!
ixesha elitsha lilahlekile esithubeni
icula nini ukuphuma kwiithiyetha
Umhla wokukhutshwa okuqhubekayo
Uluhlu lwamaphupha amabi ekhitshini lweziqendu
indlu yamakhadi kwisizini ezayo
umzingeli x umzingeli 2011 ixesha elitsha